တရုတ်ဆန့်ကျင် - Blower ပိတ်စအိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး, အမြင့်အသုံး Bag Filter ကို, အဝတ်အထည်အိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေးထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း
ဆန့်ကျင် - Blower ပိတ်စအိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး,မြင့်မားသောစွမ်းရည် Bag Filter ကို,အထည်အိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး,anti-Blower ဖုန်ကောက်ခံရေး,,
Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်: 11% - 20% Cert: FAMI-QS, GB, ISO9001, ISO9002 ဖေါ်ပြချက်: ဆန့်ကျင် - Blower ပိတ်စအိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး,မြင့်မားသောစွမ်းရည် Bag Filter ကို,အထည်အိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး,anti-Blower ဖုန်ကောက်ခံရေး,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဖုန်စုပ်စက် > ဆန့်ကျင် - Blower ပိတ်စအိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး
ဆန့်ကျင် - Blower ပိတ်စအိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ဆန့်ကျင် - Blower ပိတ်စအိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး, မြင့်မားသောစွမ်းရည် Bag Filter ကို ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, အထည်အိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 1000 / Set/Sets
တရုတ်နိုင်ငံ ဆန့်ကျင် - Blower ပိတ်စအိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး ပေးသွင်း
နောက်ကျောအိတ် filter ကိုမှုတ်
အိတ် filter ကိုမှုတ်ကျောအိတ် duster အမျိုးမျိုးတို့ကို၏အားသာချက်များကိုအိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာနှစ်ဦးစလုံး condenses ။ ဒါဟာဆိုင်ကလုန်းဖုန်မှုန့်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့် filter ကိုမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးယန္တရား၏ယန္တရားပေါင်းစပ်ထားတဲ့မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာ၏အသစ်တစ်ခုအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး, ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားပစ်ရန်အထူးသန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုသည်။
အိတ် filter ကိုမှုတ်ကျောအိတ် duster အမျိုးမျိုးတို့ကို၏အားသာချက်များကိုအိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာနှစ်ဦးစလုံး condenses ။ ဒါဟာဆိုင်ကလုန်းဖုန်မှုန့်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့် filter ကိုမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးယန္တရား၏ယန္တရားပေါင်းစပ်ထားတဲ့မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာ၏အသစ်တစ်ခုအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး, ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားပစ်ရန်အထူးသန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုသည်။ မြန်နှုန်းမြင့်ဖုန်မှုန့်လေကောင်းလေစီးဆင်းမှုနှင့်အတူတိုက်ရိုက်အပေါ်ယံအခွံကို filter ကိုအိတ်ရှောင်နှင့် filter ကိုအိတ်၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝရွေ့သည်, နောက်ကျောမှုတ်ဖုန်မှုန့်အရင်းအမြစ်များ၏သန့်ရှင်းတဲ့လေထုအရင်းအမြစ်လေကြောင်းမှုတ်ကျော၏လေကြောင်းစီးဆင်းမှုနှင့်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းကြားရှိအပူချိန်ကွာခြားချက်ကိုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်နိမ့်ဆုံးကန့်သတ်ဖို့ငွေ့ရည်ဖွဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းမှုကိုလျော့နည်းစေသောသန့်စင်ပြီးနောက်သန့်ရှင်းတဲ့လေကောင်းလေစီးဆင်းမှုကနေမိတ်ဆက်သည်။
အဆိုပါထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်သတ္တုတွင်း, သတ္တုဗေဒ, စက်ပစ္စည်းကုန်ထုတ်လုပ်မှု, foundry, ဓာတု, စက္ကူပြုလုပ်ခြင်း, ဆန့်ကျင်ဘက်, ဘိလပ်မြေ, ကျောက်ဂွမ်း, စက်မှုဇုန်လညျးမီးဖိုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းပြန်လည်နာလန်ထူ, flue ဓာတ်ငွေ့မြေမှုန့်ကိုထိန်းချုပ်ကဲ့သို့သောအခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုကြသည်။
မြေမှုန့်လေကြောင်းစီးဆင်းမှုမြေမှုန့်စုဆောင်းသို့ဖြတ်နေသည်ပြီးနောက်, ကြီးမားတဲ့အမှုန်ဖုန်မှုန့်ကွဲကွာခြင်းနှင့်ပထမဦးဆုံးပြာရေပုံးသို့ကျဆင်းလျက်, သေးငယ်တဲ့ဖုန်မှုန့်အမှုန်ဟာ Airflow ဖြန့်ဖြူး device ကိုမှတဆင့်ဓာတ်ငွေ့အတွက်ဆိုင်းငံ့နေကြတယ်, အညီအမျှအဆိုပါ filter ကိုအခန်းထဲကဝင်ရောက်အတွက်မီးသေနတ်များဖြစ်ပါတယ် ထို filter ကိုအိတ်အကြားကွာဟမှုများနှင့် filter ကိုအိတ်ပိတ်ဆို့ခံရခြင်း, နှင့်စင်ကြယ်ဓါတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုကိုအဓိကပန်ကာများကဆေးရုံကဆင်းသည်။
1. အိတ်များ၏အသွင်သဏ္ဌာန်အရကပြားချပ်ချပ်အိတ် (trapezoidal နှင့်ပြားချပ်ချပ်ပုံ) နှင့်ပတ်ပတ်လည်အိတ် (Cylinder ပုံစံ) သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။
အောက်ဖက်ကိုလေတိုက်နှင့်အထက်သို့လေ, လေတိုက်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်လက်ရှိ (သာပန်းကန်ကဲ့သို့ပြားချပ်ချပ်အိတ်): 2. လေတိုက်ဝင်ရောက်နှင့်ထွက်ခွာရာလမ်းအရဒါဟာသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။
ပြင်ပ filtration နှင့်ပြည်တွင်း filtration: 3, အိတ် filter ကိုနည်းလမ်းအရသိရသည်သို့ခွဲခြားထားတယ်။ အဆိုပါ filter ပစ္စည်းဝါဂွမ်းအမျှင်ဓာတ်, သိုးမွှေးအမျှင်ဓာတ်, ဒြပ်ဖိုင်ဘာနှင့်ဖန်ထည်ဖိုင်ဘာပါဝင်ပါသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအမျှင်လုပ်ထားတဲ့အဆိုပါ filter ပစ္စည်းကွဲပြားခြားနားသောဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်။ အဆိုပါအသုံးအများဆုံး filter ကိုပစ္စည်း 208 သို့မဟုတ် 901 terylene flannelette ဖြစ်ပါသည်, အသုံးပြုမှုအပူချိန်ဆီလီကွန်ဗဓေလသစ်ကုသမှုအပြီးတွင်ထက်ပိုမို 120 ဒီဂရီ C မှာ, ဖန်ခွက်ကိုဖိုက်ဘာ filter ကိုအိတ်မဟုတ်ပါ, အပူချိန်ယေဘုယျအားဖြင့် 250 ကျော်ဒီဂရီ C မှာမဟုတျပါဘူး, အဂွမ်းထည်ဖြစ်ပါသည် အဘယ်သူမျှမချေးဖို့ယေဘုယျအားဖြင့်သက်ဆိုင်သော; အပူချိန် 80-90 စင်တီဂရိတ်ဓာတ်ငွေ့ကိုအောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။
1, မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးထိရောက်မှုမြင့်မားတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ကထောင်ချောက်သေးငယ်တဲ့ 0.3 မိုက်ခရွန်ထက်ပိုကြီးတဲ့တစ်ဦးချင်းနှင့်အတူအမှုန်များနှင့်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးများ၏ထိရောက်မှုထက်ပို 99% ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
2, တိုက်ရိုက်ယူနစ်အဖြစ်ထူထောင်တစ်နာရီလျှင်ကုဗမီတာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာမှစက်ကိရိယာတခုအနီးတွင်စတုရန်းမီတာသေးငယ်တဲ့စတုရန်းမီတာအခန်းထဲမှာတစ်နာရီလျှင်နာရီရာပေါင်းများစွာအားဖြင့်လေထုအသံအတိုးအကျယ်ကိုင်တွယ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏အသုံးပြုမှုကို, အစရှိနိုင်ပါသည် ကြီးမားတဲ့ဖုန်မှုန့်တဲ့အခန်းအဖြစ်အသုံးပြုကြောင်း, "အိတ်အိမ်သူအိမ်သား" ဖြစ်ပါတယ်။
3, အိတ် filter ကို၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့, တည်ငြိမ်စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုဖြစ်သည်, (ESP နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ) လျော့နည်းကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု။ ထို့ကြောင့်အိတ် filter ကိုကျယ်ပြန့်, မြေမှုန့်ညစ်ညမ်းမှုဖယ်ရှားပစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ပစ္စည်းများကိုပြန်သုံးဖို့အသုံးပြုသည်။
4. အိတ် filter ကို၏သော့ချက် filter ကိုပစ္စည်းထက်ပိုမို2နှစ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ယခုဖြစ်တယ်, 4-6 နှစ်က '' စွမ်းဆောင်ရည်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။
ခြောက်သွေ့တစ်ပိုင်းခြောက်သွေ့တဲ့ desulphurization စနစ်များခုနှစ်တွင် 5. flue ဓာတ်ငွေ့အတွက် SO2 ၏အခန်းကဏ္ဍကိုထပ်မံလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: ဆန့်ကျင် - Blower ပိတ်စအိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး , မြင့်မားသောစွမ်းရည် Bag Filter ကို , အထည်အိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး , anti-Blower ဖုန်ကောက်ခံရေး , ဘွိုင်လာအိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး